Ny fanadihadiana farany na farany dia tsy tatitra tsara sy sary mahafinaritra fotsiny. Ny fahaizana manara-maso ny lalan'ny mpanjifa tsirairay, manomboka amin'ny touchpoint voalohany ka hatramin'ny fividianana matetika, dia afaka manampy ny orinasa hampihena ny vidin'ny fantsona fanaovana dokambarotra tsy mahomby sy be loatra, mampitombo ny ROI, ary manombatombana ny fiantraikan'ny fisian'izy ireo amin'ny Internet amin'ny varotra ivelan'ny Internet. Ny mpandalina OWOX BI dia nanangona fandinihana tranga dimy nanehoana fa ny fanadihadiana avo lenta dia manampy ny orinasa hahomby sy hahazo tombony. Mampiasà Analytics an-tendrony farany hanombanana ireo fandraisana anjara an-tserasera Ny toe-javatra. A
Alakamisy 16 martsa 2017 Alakamisy 23 martsa 2017 Douglas Karr
Andao atomboka ity resaka ity amin'ny filazako fa tsy mitombina daholo ny porofo ananako. Tsy mbola nanao fikarohana be dia be aho hanaporofoana ny toetrako; Manohy manana olona marobe mibitsibitsika amiko fotsiny aho fa tsy mampiasa media sosialy hitarika valiny. Ary tsy mijaly mihitsy izy ireo; mahomby ny orinasany. “Andraso!”, Hoy ianao nanambara, “Afaka nanao zavatra tsara lavitra ry zareo!” Tsia. Ny iray amin'ireo orinasa dia manana fitomboana mihoatra ny 100% YoY ao